Uma ufuna ikhwalithi ephezulu I-Palmitoylethanolamide (PEA) impuphu iyathengiswa, bese usendaweni efanele. Singomunye wabakhiqizi bePalmitoylethanolamide (PEA) abadume kakhulu, abanolwazi, nabanolwazi eChina. Sinikezela ngemikhiqizo emsulwa futhi ehlanganiswe kahle ehlala ihlolwa ilabhorethri esezingeni lomhlaba esezingeni eliphansi ukuqinisekisa ubumsulwa nokuphepha. Sihlala siletha ama-oda e-US, eYurophu, e-Asia, nakwezinye izingxenye zomhlaba. Ngakho-ke uma ufuna ukuthenga iPalmitoylethanolamide (PEA) impuphu esezingeni eliphakeme kakhulu, xhumana nathi ku-cofttek.com.
Iyini i-Palmitoylethanolamide esetshenziselwa?
I-Palmitoylethanolamide (PEA) ingeyamalungu omndeni we-endocannabinoid, iqembu lama-amide acid amides. I-PeA kuye kwafakazelwa ukuthi inomsebenzi we-analgesic futhi wokulwa nokuvuvukala futhi isetshenziswe ezifundweni eziningana ezilawulwayo ezigxile ekuphathweni kobuhlungu obungapheli phakathi kweziguli ezindala ezinezimo zomtholampilo ezihlukile ezingaphansi.
Kuthathwe ngemithamo ye 500mg-1.5g ngomthamo ngamunye, njalo emahoreni ambalwa, i-PEA inikeza umsebenzisi umuzwa wenjabulo, amandla, ukukhuthazeka, kanye nenhlalakahle jikelele. I-Esp uma ihlanganiswe ne-mao-b inhibitor, i-hordenine, i-PEA iba nezinga elisha lokujabula kanye nenjabulo ephelele.
Iyini imiphumela emibi yepea?
Ayikho imiphumela emibi eyinkinga eyaziwayo. I-PEA ingathathwa kanye nanoma iyiphi enye into. Ithuthukisa umphumela wokuqeda izinhlungu wama-analgesics akudala nama-anti-inflammatories. I-Palmitoylethanolamide ingasetshenziswa ngokuhlangana nezinye izinto ngaphandle kwemiphumela emibi.
Ingabe i-phenethylamine isemthethweni?
I-Phenethylamine (i-PEA) iyinhlanganisela ephilayo, i-monoamine alkaloid yemvelo, kanye ne-trace amine, esebenza njengohlelo oluphambili lwezinzwa ezikhuthaza abantu.
Ihlala isikhathi esingakanani i-PEA?
Lapho ithathwa ngomlomo: Ukuthatha i-palmitoylethanolamide KUNGENZEKA KUPHEPHE kubantu abaningi abadala lapho isetshenziselwa izinyanga ezifika kwezintathu. Imiphumela emibi engaba khona, efana nesisu esicasukile, ayivamile kakhulu. Alukho ulwazi olwanele oluthembekile lokwazi ukuthi ngabe i-palmitoylethanolamide iphephile ukuthi ingasetshenziswa isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezintathu.
Ngabe i-phenylethylamine izokwehluleka ukuhlolwa kwezidakamizwa?
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-melatonin ayilawulwa ngokuqinile yi-Food and Drug Administration (FDA). Kungenxa yokuthi i-melatonin ayithathwa njengesidakamizwa. Ngakho-ke, ingathengiswa njengesengezo sokudla njengamavithamini namaminerali, angabhekwa ngeso elibukhali yi-FDA.
Ingabe i-pea supplement iphephile?
I-PEA yinto yemvelo ekhiqizwa ngumzimba; kusebenza kahle futhi kuphephile ukukusebenzisa njengesengezo sobuhlungu nokuvuvukala.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uphizi lukhahlele?
Uphizi uthatha izinsuku eziyi-7 kuya kwezingama-30 ukuhluma. Ama-peas azohluma ngokushesha uma amazinga okushisa omhlabathi angama-65 kuya kuma-70 degrees Fahrenheit. Ungasheshisa inqubo yokuhluma ngokufaka uphizi amahora angama-24 kuye kwangama-48 ngaphambi kokutshala. Vele kunezinye izinto ezithinta ukuthi uphizi uzokhula ngokushesha kanjani futhi ukhule kanjani.
Ungathenga i-phenylethylamine ezitolo?
Lezi zithasiselo uma zisetshenziswa zisiza ekwandiseni izinga lomsebenzi wobuchopho nokunciphisa ukucindezeleka. Iyatholakala ngaphezu kwekhawunta, futhi umuntu akadingi kadokotela ukuyithenga. I-phenylthylamine nayo isetshenziselwa ukuthuthukisa ukugxila nokugxila.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ipea lisebenze?
Senze lolu hlelo lokwelashwa ngemuva kokwelapha amakhulu eziguli ezibuhlungu ze-neuropathic. Ngokuya ngokuhlangenwe nakho kwethu komtholampilo, sicabanga ukuthi ukuqala ngohlobo lwezilimi ezingaphansi kwe-PEA okungenani izinsuku eziyi-10 kungasiza ukufinyelela ngokushesha emazingeni okwelashwa e-PEA.
Ingabe ipea iyasiza ngokulala?
Uhlobo lwamafutha atholakala ngokwemvelo emzimbeni lungaba ukhiye wokulala kahle ebusuku. Abaphenyi banethemba lokuthi i-molecule eyaziwa ngokuthi yi-PEA - noma i-palmitoylethanolamide - ayikwazanga ukusiza ngokulala kuphela kodwa futhi nokulwa nobuhlungu nokunciphisa ukuvuvukala.
Ngabe iPea iyashukumisa?
I-phenylethylamine ihlala isikhathi esingakanani kusistimu yakho?
Ingathathwa kanye neminye imithi yezinhlungu noma iyodwa, njengoba yelulekwe uchwepheshe wezokunakekelwa kwempilo, ukusekela ukukhululeka kobuhlungu. I-PEA ingasiza futhi ekunciphiseni ukuthembela emithini yezinhlungu eqinile edala imiphumela emibi engadingeki. Inzuzo enkulu ingathatha izinyanga ezifika kwezingu-3 kepha imiphumela ibonwa emavikini angu-4-6.
Ingabe ushokoledi uqukethe i-phenylethylamine?
Ushokoledi unokuhlushwa okuphezulu kakhulu kunoma yikuphi ukudla kwe-phenylethylamine, okuyikhemikhali elenziwa ebuchosheni lapho umuntu esothandweni. Kodwa indima ye "chocolate amphetamine" iyaphikiswa. Iningi uma kungeyona yonke i-phenylethylamine eyenziwe ngoshokoledi ihlanganiswa ngaphambi kokufika ku-CNS.
Itholakala kuphi i-phenylethylamine?
Ezilwaneni ezincelisayo, i-phenethylamine ikhiqizwa kusuka ku-amino acid L-phenylalanine yi-enzyme enamakha i-L-amino acid decarboxylase nge-enzymatic decarboxylation. Ngaphezu kobukhona bayo ezilwaneni ezincelisayo, i-phenethylamine itholakala kwezinye izinto eziningi nokudla, okufana noshokoledi, ikakhulukazi ngemuva kokuvutshelwa kwamagciwane.
Ingabe i-phenylethylamine ikukhuphula phezulu?
Kuthathwe ngemithamo ye-500mg-1.5g ngomthamo ngamunye, njalo emahoreni ambalwa, i-PEA inikeza umsebenzisi umuzwa wenjabulo, amandla, ukukhuthazeka, kanye nokuphila kahle. I-Esp uma ihlanganiswe ne-mao-b inhibitor, i-hordenine, i-PEA iba nezinga elisha lokujabula kanye nenjabulo ephelele.
Uhlala isikhathi esingakanani uHordenine ohlelweni lwakho?
Kubhali, amazinga e-hordenine afinyelela phezulu kungakapheli izinsuku ezingama-5-11 zokuhluma, bese ancipha kancane kuze kube yilapho sekusele imikhondo ngemuva kwenyanga eyodwa. Ngaphezu kwalokho, i-hordenine itholakala ikakhulukazi ezimpandeni.
Ngabe iPalmitoylethanolamide (PEA) iphephile?
Yize iPalmitoylethanolamide ibekezelelwa kahle ngumzimba, uma kwenzeka abantu bebona noma yimiphi imiphumela emibi, bayelulekwa ukuthi banciphise inani lomthamo liye kuma-400 mg ngosuku.
Okubaluleke kakhulu ukuthi, i-compact akufanele ithathwe izinyanga ezingaphezu kwezintathu. Ukusetshenziswa okuqinile kwe-PEA kungaholela ezinkingeni zesisu. Noma kunjalo, kungumphumela wecala ongakaze ubonwe. Okubaluleke kakhulu, i-PEA akufanele isetshenziswe esikhumbeni futhi abakhulelwe futhi abesifazane abancelisayo kufanele bangahlali nokusetshenziswa kwayo njengoba kungekho lucwaningo noma ubufakazi obanele bokuthi umuthi uphephile kulawa maqembu. Ngokufanayo, uma uhlushwa noma yisiphi isimo, kungcono ngaso sonke isikhathi ukubonana nodokotela ngaphambi kokuthatha isengezo esifana nePalmitoylethanolamide.
Impendulo iwukuthi Cofttek. ICofttek ingumkhiqizi wezinto zokwenziwa ezingasetshenziswanga owaba khona ngo-2008. Le nkampani iyaziqhenya kakhulu ngethimba layo elinamakhono kakhulu le-R & D elisebenza ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuthi impahla eluhlaza enikezwa amaklayenti isezingeni eliphakeme kakhulu. Okubaluleke kakhulu, inkampani itshala imali kakhulu kwi-biotechnology nasekuhlolweni kokuhlaziya. Yonke imikhiqizo edayiswa yinkampani yenziwa ngefektri yabo enkulu, yobuchwepheshe obuphakeme obuziqhenya ngezinhlelo zabahlinzeki abavuthiwe nezinsiza zobuchwepheshe zakamuva. Lokhu ukuzibophezela okwenziwe yinkampani ukukhiqiza izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme ezenze iCofttek igama elaziwa kahle emakethe yezinto ezingavuthiwe. Namuhla, inamakhasimende emhlabeni jikelele.
Kuyini ukhilimu wepea?
PEA ukhilimu ukhilimu oqukethe ukugxila okuhle kwezinto zemvelo nezokuvikela i-palmitoylethanolamide (PEA). Ukhilimu we-PEA ngakho-ke ungasetshenziswa njengesengezo esihle somphumela wama-capsule emzimbeni.
IPalmitoylethanolamide (PEA) iyimolekyuli enamafutha ekhiqizwa ngamanani amancane nomzimba, ikakhulukazi ekuphenduleni ukulimala kwezicubu noma ukulimala kwezicubu noma kwemisipha. I-PEA ikhiqizwa ngokwemvelo amasosha omzimba ekuphenduleni ubuhlungu noma ukuvuvukala. I-Palmitoylethanolamide, eyaziwa nangokuthi i-PEA iyi-lipid eyenzeka ngokwemvelo ewela ngaphansi kweqembu elinama-acid amide. Yize le nhlanganisela ikhiqizwa amasosha omzimba, ikhona nasezilwaneni nasezitshalweni ngakho-ke, ingatholwa emithonjeni yangaphandle, njengeqanda leqanda, i-soy lecithin, i-alfalfa, ubisi, amakinati kanye nesoya. I-PEA inezakhiwo ze-analgesic zamandla ngakho-ke, iyakwazi ukuthonya imisebenzi eminingana ebalulekile yomzimba emzimbeni.
I-PEA ithathwa kakhulu ngenhloso yokulwa nokuvuvukala nokunciphisa izinhlungu. Ngakho-ke, i-PEA isebenza kanjani kanye ngaphakathi komzimba? Uma usungaphakathi komzimba, i-PEA izibophezela endaweni eqondisiwe ecisha umsebenzi wokuvuvukala weseli ngemuva kwenqubo yokubopha. Okubaluleke kakhulu, olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi umphumela we-analgesic we-PEA ungabangelwa amandla ekhompiyutha okuvimbela ukusebenza kwamaseli akhethekile omzimba abhekele ukudlulisa izimpawu zobuhlungu. Kungakhathalekile ukuthi iyiphi inqubo ngqo, into eyodwa iqinisekile ukuthi i-PEA inikeza ukukhululeka ebuhlungwini be-neuropathic kanye nokuvuvukala.
Kungani Sidinga iPalmitoylethanolamide (PEA)?
Eminyakeni embalwa edlule, I-Palmitoylethanolamide (PEA) ukubone ukuvela okungazelelwe kokuthandwa kwayo. Yize ukutholakala kwezokwelapha kwe-PEA kwatholakala emuva ngawo-1950 futhi kusukela lapho, ososayensi nabaphenyi bafunda kabanzi lokhu kuhlanganiswa, eminyakeni embalwa edlule, inzalo ye-PEA ikhule ngamanani amaningi. Lokhu ngokuyinhloko kungenxa yendima yokuvikela neyokuphulukisa engadalwa yikhompiyutha ngaphakathi komzimba kanye nekhono layo lokusingatha izingqinamba eziningi zokuvuvukala kanye ne-neuropathic.
Kodwa-ke, umzimba womuntu ukhiqiza i-PEA ngenani elincane kakhulu futhi kaningi kunalokho, leli nani alwanele ukucindezela ukuvuvukala nobuhlungu futhi ngenxa yalokho, abantu bavame ukwelulekwa ukuthi bathathe izithasiselo ze-PEA. Ukunciphisa izinhlungu nokuvuvukala kungenye yezinzuzo eziningi ze-PEA.
Iyini i-PEA ye-fibromyalgia?
Njengempahla eyenzeka ngokwemvelo i-PEA supplements ihlukaniswa e-Australia, nakwamanye amazwe amaningi, njengomkhiqizo wokudla, hhayi umuthi. I-PEA ikhonjisiwe ukuthi inezindawo zokulwa nokuvuvukala, i-antinociceptive, i-anticonvulsant kanye ne-neuroprotective futhi iyaqhubeka nokusetshenziswa ekwelapheni ubuhlungu obungapheli.
Kuyini ukukhululeka kobuhlungu be-neuropathic?
Ukwelashwa Kwezinhlungu Ze-Neuropathic Izidakamizwa ze-Anticonvulsant kanye ne-anti-depressant zivame ukwelashwa kokuqala. Ezinye izifundo zobuhlungu be-neuropathic ziphakamisa ukuthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezingezona ukuvuvukala (ama-NSAID), njenge-Aleve noma iMotrin, kungadambisa izinhlungu. Abanye abantu bangadinga i-painkiller enamandla.
Ngingalala kanjani nobuhlungu be-neuropathic?
Ukulala ngamadolo akho kuphakanyisiwe kunganciphisa izimpawu zakho ezibuhlungu ngokunciphisa ingcindezi ama-lumbar discs akho ayibeka ezimpandeni zakho zezinzwa. Lala phansi ngomhlane — gcina izithende nezinqe zakho zithintana nombhede bese ugoba amadolo akho kancane ophahleni.
Amasu Wokudambisa Ubuhlungu Bemithambo. Gcina phezulu kwesifo sikashukela. Uma unesifo sikashukela, gcina ushukela wegazi ulawulwa. Yisuse. Ukuvivinya umzimba kukhipha amaphilisi ezinhlungu zemvelo abizwa ngokuthi ama-endorphin. Phambanisa izinyawo zakho. Uma izinyawo zithinteka ubuhlungu bezinzwa, sekuyisikhathi sokugxila ekunakekelweni kwezinyawo okuhle.
Ingabe amanzi okuphuza ayasiza nge-neuropathy?
Akugcini lapho ukuphumula kwamanzi afudumele, kepha futhi kungakhuphula nokusakazwa emzimbeni wakho wonke. “Kungakunikeza usizo ngokushesha,” kusho uVinik. Kepha ngenxa yokuthi i-neuropathy yesifo sikashukela ingaholela ekulahlekelweni umuzwa, qiniseka ukuthi amanzi awashisi kakhulu ngaphambi kokungena.
Akufanele isetshenziswe ngabesifazane abakhulelwe. IPalmitoylethanolamide ingasiza ekubhekaneni nokudla ukuvuvukala nobuhlungu obungapheli. Kufanele ithathwe kuphela ngaphansi kokuqondisa kwezokwelapha.
Yini i-pea liquid esetshenziselwa?
IPalmitoylethanolamide yikhemikhali elenziwe ngamafutha. Itholakala ngokwemvelo ekudleni okufana nezikhupha zamaqanda namakinati, nasemzimbeni womuntu. Iphinde isetshenziswe njengomuthi.
Uyini umuthi wepea?
I-Epinephrine kufanele inikezwe ngemithamo ye-1-mg ngemithambo yegazi / nge-intraosseously (IV / IO) njalo ngemizuzu engu-3-5 ngesikhathi sokuboshwa kogesi (i-PEA). Ukufundwa okuphezulu kwe-epinephrine sekufundwe futhi akubonisi ukuthuthuka ekusindeni noma emiphumeleni ye-neurologic ezigulini eziningi.
Ingabe i-Pea ijwayelekile ezigulini ezine-hypovolemia?
Ezingxenyeni ze-PEA etiologies, i-pseudo-PEA ivame ukubangelwa yi-hypovolemia, i-tachydysrhythmias, ukwehla kwesivumelwano senhliziyo, noma ukuvimbela ukusakazwa kwegazi, okufana ne-pulmonary embolism, i-tamponade, ne-tension pneumothorax.
Yikuphi kokulandelayo okungenzeka kube yizimbangela eziguqukayo zesigqi se-pea?
I-Hypovolemia ne-hypoxia yizimbangela ezimbili ezivame kakhulu ze-PEA. Futhi zingabuyiselwa emuva kalula futhi kufanele zibe phezulu kunoma yikuphi ukuxilongwa okwehlukile. Uma lowo muntu ebuya ngokujikeleza okuzenzakalelayo (i-ROSC), qhubeka nokunakekelwa kokuboshwa ngemuva kwenhliziyo.
Eminyakeni embalwa edlule, ukuthandwa kwePalmitoylethanolamide kufakazele ukuqhuma okukhulu, ikakhulukazi ngoba abantu sebekwazi kakhulu ukusetshenziswa kwayo okuningana. Kulezi zinsuku, abantu basebenzisa iPalmitoylethanolamide ikakhulukazi ngomphumela wayo we-analgesic, kepha futhi kuyabekwa kaningi ukulwa nezifo ezibucayi, njengesifo sikaLou Gehrig, isifo sikashukela sesifo sikashukela, i-multiple sclerosis, i-fibromyalgia, i-carpal tunnel syndrome, i-glaucoma, i-autism, i-eczema, i-endometriosis kanye ezinye izifo ezahlukahlukene. Kulezi zinsuku, izithasiselo zePalmitoylethanolamide (PEA) nazo zisetshenziswa ngabantu ukukhuthaza ukwehlisa isisindo. Kodwa-ke, olunye ucwaningo ludinga ukwenziwa kule ndawo.
① Ucwaningo Lokuqala Lukhombisa Imiphumela Ethembisayo Ekwelapheni Isifo sikaLou Gehrig
Isifo sikaLou Gehrig noma i-Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) yisifo esisongela impilo esiholela ekuwohlokeni kwemotor-neuron futhi ekugcineni sikhubazeke ngokuqhubekayo. Ucwaningo lwakuqala lukhombisa ukuthi i-palmitoylethanolamide lapho ithathwa nge-riluzole, ingasiza ukuthuthukisa lesi simo. I-PEA iyi-endocannabinoid ethuthukisa ukusebenza kwamaphaphu ezigulini ze-ALS.
② Isiza nge-Carpal Tunnel Syndrome
ICarpal Tunnel Syndrome yisimo esithinta isandla. Abantu abaphethwe yilesi simo bahlangabezana nokudangala nokuqina kwesandla. Isimo sithinta isandla sonke, kufaka phakathi yonke iminwe ngaphandle komunwe omncane. Ucwaningo olwenziwe ngo-2017 lwembula ukuthi i-PEA ingasetshenziswa ngempumelelo ekwelapheni ama-syndromes acindezelayo, kufaka phakathi i-Carpal Tunnel Syndrome. Ngakho-ke, ama-supplements we-PEA angathathwa ukuze alawulwe wubuhlungu nokuphazamiseka okubangelwa yiCarpal Tunnel Syndrome.
③ Kuyaphumelela Ngokumelana Ne-Diabetes Neuropathy ne-Fibromyalgia
I-diabetes neuropathy ingukulimala kwezinzwa okubangelwa yisifo sikashukela. Esinye sezimpawu ezivame kakhulu zesifo sikashukela esizwa ubuhlungu besifo sikashukela ubuhlungu emilenzeni nasezinyaweni. I-Fibromyalgia, ngakolunye uhlangothi, yisimo esithinta uhlelo lwe-musculoskeletal. Kanye nokukhathala nezinkinga zememori, uphawu oluvame kakhulu lwe-fibromyalgia lubuhlungu kulo lonke uhlelo lwe-musculoskeletal.
Zombili i-neuropathy yesifo sikashukela kanye ne-fibromyalgia yizimo ezibuhlungu ezingejwayelekile kakhulu. Ngenhlanhla, izinhlungu ezihambisana nazo zombili lezi zimo zingalawulwa ngokusetshenziswa kwe-Palmitoylethanolamide.
④ Ingasetjenziselwa Ukwelapha Izimpawu ze-Multiple Sclerosis
I-Multiple Sclerosis yisimo lapho amasosha omzimba eqala khona ukuhlasela i-myelin esemboza izinzwa, okubuye kuholele ekunciphiseni noma kungabikho ukuxhumana phakathi kobuchopho nawo wonke umzimba. Lesi sifo singakhubaza ngokuphelele. Kodwa-ke, ucwaningo olwandulelayo lukhombisa ukuthi i-Pea, uma inikezwe ihlanganiswe ne-interferon-beta1a, ingasiza ukunciphisa izimpawu ezihlangene ne-Multiple Sclerosis.
⑤ Kuyasebenza Ngokulwa Ne-Glaucoma kanye ne-Temporomandibular Disriers
IGlaucoma yisimo esithinta i-opic nerve futhi siyimbangela ehamba phambili yobumpumputhe kubantu abaneminyaka yobudala engama-60 nangaphezulu. Ukuphazamiseka kwe-TMJ, ngakolunye uhlangothi, kubangela izinhlungu zomhlathi. Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-Palmitoylethanolamide noma i-PEA ingasetshenziswa ukwelapha ubuhlungu obubangelwa yizo zombili lezi zimo.
⑥ Ezinye izinzuzo
Ngaphandle kokusetshenziswa okukhulunywe ngenhla, i-Pea nayo iyanconywa ngobuhlungu bezinzwa kanye ne-analgesic yangemva kokuhlinzwa. Kwezinye izimo, kubuye kusetshenziselwe ukwelapha ezinye izimo, njengokukhanda ikhanda, ukudangala, i-eczema, i-endometriosis, i-autism, isifo sezinso nobuhlungu be-vulvar. I-PeA ikhombisile ukusebenza kahle maqondana nokuthola isisindo. Noma kunjalo, ucwaningo olwengeziwe luyadingeka kulezi zindawo.
Kuyo yonke le minyaka, izifundo ezahlukahlukene zisebenzise umthamo ohlukile ngakho-ke, akukho mthamo ongathathwa uphelele. Kodwa-ke, abantu bayelulekwa ukuthi bagcine isilinganiso semithamo yabo yePalmitoylethanolamide (PEA) ngaphansi kuka-300-1,200 mg ngosuku. Labo abathatha izithasiselo zePalmitoylethanolamide bayelulekwa ukuthi baphuze ama-350-400 mg kathathu ngosuku kanti ubude besilinganiso akumele budlule izinyanga ezi-2 isiyonke.
(1) UGabriella Contarini, uDavid Franceschini, uLaura Facci, uMassimo Barbierato, uPietro Giusti noMorena Zusso (2019) 'I-co-ultra micronized palmitoylethanolamide / luteolin composite inciphisa imiphumela yomtholampilo kanye nezimpawu ezihambelana nezifo kumodeli yegundane le-encephalomyelitis yokuhlola okuzenzakalelayo', I-Journal of Neuroinfigueation,
(2) UMaria Beatrice Passavanti, Aniello Alfieri, uMaria Caterina Pace, uVincenzo Pota, uPasquale Sansone, uGiacomo Piccinno, uManlio Barbarisi, uCaterina Aurilio noMarco Fiore (2019) 'Izicelo zomtholampilo ze-palmitoylethanolamide ekuphathweni kobuhlungu: umthetho olandelwayo wokubuyekezwa kwesikali', Ivolumu yokubuyekezwa ehlelekile,
(3) U-Eleonora Palma, Jorge Mauricio Reyes-Ruiz, Diego Lopergolo, Cristina Roseti, Cristina Bertollini, Gabriele Ruffolo Pierangelo Cifelli, Emanuela Onesti, Cristina Limatola, Ricardo Miledi, Maurizio Inghillerid (2016) 'Ama-Acetylcholine receptors avela emisipheni yomuntu njengezinjongo ze-pharmacological zokwelashwa kwe-ALS', Proc Natl Acad Sci US A.,
(4) UDi Cesare Mannelli, G. D'Agostino, A. Pacini, R. Russo, M. Zanardelli, C. Ghelardini, A. Calignano (2013) 'IPalmitoylethanolamide iyi-Agent-Modifying Agent in Pheripheral Neuropathy: Ukuphumula Kwezinhlungu Nokuvikeleka Kwezinzwa Kwabelana Nge-PPAR-Alpha-Mediated Mechanism', Abalingisi Ukuvuvukala.
(5) I-PALMITOYLETHANOLAMIDE (PEA) (544-31-0)
(6) UHAMBO LOKUHLOLA ICEBO
(7) I-OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) –IGAMA LOMLINGA LOKUPHILA KWAKHO
(9) Konke okudingeka Ukwazi NgeNicotinamide Riboside Chloride
(10) I-Magnesium L-Threonate Supplements: Izinzuzo, Umthamo, kanye Nemiphumela Emibi
(11) Izinzuzo eziphezulu ezi-6 zezeMpilo zeReververrol Supplements
(12) Izinzuzo ezi-5 eziphezulu Zokuthatha i-Phosphatidylserine (PS)
(13) Izinzuzo ezi-5 eziphezulu Zokuthatha i-Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
(14) I-Best Nootropic Supplement ye-Alpha GPC
(15) Isengezo Esingcono Sokulwa Nokuguga seNicotinamide Mononucleotide (NMN)
bardzo bolą mnie stawy i mięśnie, mam tez słabą odporność czy przyjmowanie PEA pomo pe mi. Choruje również na nerwicę lękową czy to nie będzie kolidować z psychotropami.
Iphephile inja yami enesifo esingapheli seLymes?
Isayithi elimangalisayo onalo lapha kepha bengifuna ukwazi ukuthi ngabe uyazi yini izinkundla zomphakathi ezihlanganisa izihloko ezifanayo okukhulunywa ngazo lapha? Ngingathanda kakhulu ukuba yingxenye yomphakathi lapho ngingathola khona iziphakamiso kwabanye abantu abanolwazi ababelana ngentshisekelo efanayo. Uma uneziphakamiso, ngicela ungazise. Busisiwe!
Bengilokhu ngithatha i-PEA (ne-CoQ10) kusukela ehlobo. Ekuqaleni, angikwazanga ukubekezelela ngenxa yezinkinga zesisu. Manje inkungu nobuchopho bami sebuphelile, okuyinto exakile uma ucabanga ukuthi nginazo zonke izinsuku.
Ngempela ngithatha i-PEA. Isebenza ngokungaqondile kuma-cannabinoid receptors. Inomphumela wokungezwa uma ithathwa ngama-cannabinoids afana ne-CBD. Imvamisa ithathwa nge-1,200mg / ngosuku kepha ngithatha i-400mg kuphela ngoba ngisezingeni eliphakeme kangaka le-CBD (200mg / ngosuku).
I-PEA ivela emzimbeni ngokwemvelo, ayisiyomlutha, awukwazi ukuthola ukubekezelelana futhi kufakazelwe ukuthi kuyasebenza kwezinhlungu nokuvuvukala ezifundweni kusukela ngawo-1950 ..
Umyeni wami uyayithatha futhi ucabanga ukuthi kuhle.
Ngithanda ukubonga ngemizamo oyibhalile ekubhaleni le webhusayithi. Ngethemba ukuthi ngizokubuka nokuqukethwe okusezingeni eliphezulu okufanayo ngokuhamba kwesikhathi. Eqinisweni, amakhono akho wokubhala angikhuthazile ukuthi ngithole eyami, indawo yami manje;)
Ngoba enye yezingcuphe eziphezulu kakhulu ze-COVID-19 ibonakala njengesiphepho se-cytokine lapho ukuvuvukala kubanga khona umonakalo omkhulu ngaphambi kokuthi amasosha omzimba wethu akhe amasosha omzimba okwanele ukulwa negciwane kubonakala njengesengezo esiphephile esisiza ukunciphisa inani lama-cytokines indlela enhle yokuvumela amasosha omzimba isikhathi sokulwa nalesi sifo.
Qhubeka wenze lokhu sicela, umsebenzi omuhle!
Kimi kusiza ngokuvuvukala. Futhi usizo olukhulu lokulala, thola ukozela okuhle kusuka kumthamo wesigamu.
Le nto ibukeka ithembisa
Isazi sami sokuzivikela komzimba sincoma iPalmitoylethanolamide. Ngithathe uMirica PEA izinyanga ezintathu. Kunzima ukuqiniseka. Izimpawu zami sezithuthuke kakhulu, kepha kudlule isikhathi esiningi. Ngivele ngayeka ukuyithatha futhi angiboni umehluko omkhulu ngendlela engizizwa ngayo. Angizange ngibe nemiphumela engemihle ngenkathi ngiyithatha, ngakho-ke bekungabonakali ngathi iyalimaza.
Izinto eziningi zilungile esiswini esingenalutho, ngaphandle kokuthi zisekelwa ngokungathi sína zibonisa ukumuncwa okuthuthukile hhayi nje ukuncibilika kwamafutha, ngaphandle kokuthi kubangele izinkinga zesisu (zinc)
Ngingakuthatha lokho esiswini esingenalutho futhi mhlawumbe ngikwenze kaningi kangako.
Welp ngazibeka engcupheni ngayalela abanye namhlanje. Ukukhathala kobuhlungu besisu ngethemba ukuthi kuyasebenza.
I-Palmitoylethanolamide iyi-amide enamafutha engapheli. Lokho kusho ukuthi isemzimbeni wakho njengamanje.
Abanye abantu benza nje okuncane, futhi amazinga akho ehla njengoba ukhula. Ngakho-ke ukwesekwa kungasiza ukubuyisa lawo mazinga. Kutholakala nasekudleni, futhi. Kuphephe kakhulu. Abantu abaningi abaqondi ukuthi kuyini, futhi balahlekelwa iphuzu ngokuphelele.
Uma ungumuntu onamazinga amahle emvelo we-PEA emzimbeni wakho, cishe ngeke uzizwe lutho. Kodwa-ke, abantu abanamazinga aphansi ngokwemvelo bayayizwa imiphumela ngokuqinile. Kungakho ubona imibono yokuhlukanisa kuyo.
Ngobuhlungu ngisanda kuthola i-PEA ebengiyithatha ku-1200mg nsuku zonke futhi kubonakala ngathi iyasiza
Umama wangena ku-rheumatologist wakhe ngelinye ilanga, futhi watshelwa ukuthi ama-biomarkers akhe wokuvuvukala ayemnandi, okokuqala ngqa! Angikhumbuli kahle-- futhi ngiyaqiniseka ukuthi umama akenzi-- besebenzisa silinganiso sini, kepha wangitshela ububanzi obulungile bale biomarker yokuvuvukala okuphelele kuphakathi kuka-0-30, futhi uvame kakhulu 60. Ngalesi sikhathi, wayeneminyaka engu-15.
Ngangihlala ngichitha isigamu sehora lami ngifunda okuqukethwe yilolu khasi lewebhu kanye nenkomishi yekhofi.
I-Palmitoylethanolamide ilungele ukuvuvukala nobuhlungu. I-Oleamide ingcono ekulaleni. Zombili zilungele amasosha omzimba. Sikhethe i-PEA ku-Immune Defense yethu ukuze singabangeli ukozela.
Ngiphinde ngibe ne-migraines kaningi, imvamisa izikhathi ezingama-1-2 ngenyanga kanti iPalmitoylethanolamide iyizimangaliso kimi ngenkathi ngine-migraine.
Kade ngithatha i-PEA ngempuphu. Ngikutholile ukwenza intuthuko encane ebuhlungwini ngaphezu kwazo zonke ezinye izinto engizithathayo.
Kulungile enye i- (P) Phenyl (E) ethyl (A) amine kanti enye i- (P) Palmitoyl (E) ethanol (A) amide. Futhi, abantu badida iPhenylethylamine nePhenylalanine ngaso sonke isikhathi, kanye neCytisine neCysteine. Kwesinye isikhathi izinhlanganisela zamakhemikhali zipelwa zisondelene kakhulu, futhi kwesinye isikhathi zinesifinyezo esifanayo. Ngeke ngisho ukuthi ngiyayithanda, kepha iPalmitoyalethanolamide ingumlomo. Ngakho-ke ukuyifingqa kulula kakhulu.
Ngayithatha ngezinhlungu zesisu (imbangela ingaziwa) futhi yasebenza kahle. Futhi kuyisithako esiyinhloko ekwelapheni okwelashwa yinja yami (kokungezwani nezinto ezithile komzimba) futhi kubonakala kuyasiza.
Ayikho imiphumela emibi kithi. Akuzange kuthinte ukulala kwami. Hawu! Kepha futhi kwasusa idolo lami elibuhlungu, okwakuyibhonasi engalindelekile.
I-PEA ingisiza ukuba ngibone ukuthi nginezinga lobuhlungu eliphansi eliqhubekayo, futhi kumnandi lapho lokho kwehla isikhashana.
Ngihlushwe yizinhlungu ezingapheli zomqolo cishe iminyaka eyishumi. I-PEA iyenza ibe ngokulingene, futhi lapho ubuhlungu bami buyinto ecasulayo evamile, i-PEA ibonakala yenza umzimba wami wonke uzizwe ukhululekile.
I-Palmitoylethanolamide iyi-amide enamafutha engapheli. Lokho kusho ukuthi isemzimbeni wakho njengamanje. Abanye abantu benza nje okuncane, futhi amazinga akho ehla njengoba ukhula. Ngakho-ke ukwesekwa kungasiza ukubuyisa lawo mazinga. Kutholakala nasekudleni, futhi. Kuphephe kakhulu. Abantu abaningi abaqondi ukuthi kuyini, futhi balahlekelwa iphuzu ngokuphelele. Uma ungumuntu onamazinga amahle emvelo we-PEA emzimbeni wakho, cishe ngeke uzizwe lutho. Kodwa-ke, abantu abanamazinga aphansi ngokwemvelo bayayizwa imiphumela ngokuqinile. Kungakho ubona imibono yokuhlukanisa kuyo.
Manje maqondana nombuzo wakho mayelana ne-COX-2 ngqo, kuyimoduli ye-COX-2, hhayi isivimbeli sokuncintisana. Ibopha ama-endocannabinoid receptors GPR55 ne-GPR119. Ngaleyo ndlela ilawula ukubonakaliswa kwe-cyclooxygenase-2 (COX-2) kanye ne-nitric oxide synthase (iNOS) engafakwanga. Futhi yi-PPAR-α agonist, elawula ukonakaliswa kwe-IkB-alpha kanye ne-p65 NF-kappaB translocation yenukliya. Ama-PPAR-α alo asetshenziswayo empeleni ayinciphisa kanjani i-neuroinfigueation. Ngaphezulu kwama-affinities ayo abophezelayo, kuholela ekubambeni okukhulayo kwe-anandamide kuma-receptors e-CB1 kanye ne-CB2, okuyi-endocannabinoid eyinhloko yomzimba wakho. Yinhlanganisela epholile impela!
Vele bengifuna ukubhala mayelana nale nto engaziwa ethembisa kakhulu iziguli ezibuhlungu ezingamahlalakhona. I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) i-fatty acid amide eyenzeka ngokwemvelo emzimbeni womuntu nasemizimbeni yezinye izilwane nezitshalo eziningi. Udokotela wase-Italy ogama lakhe linguRita Levi-Montalcini uthole ukuthi i-PEA inezinto ezilwa nokuvuvukala nezinhlungu
Esivivinyweni esiphindwe kabili esiyimpumputhe, esilawulwa yi-placebo esineziguli ezingama-636 zobuhlungu be-sciatic, inombolo edingekayo yokwelapha (i-NNT) ukufinyelela kuma-50% okuphungula ubuhlungu uma kuqhathaniswa nesisekelo kwakungu-1.5 ngemuva kwamasonto amathathu okwelashwa
I-PEA icwaningelwa izinhlobo eziningi zobuhlungu. Ayikho imiphumela emibi eye yabonwa kuze kufike lapho bengingasho khona.
Ukubuyekezwa okuncane okuxoxa ngokusetshenziswa kwePalmitoylethanolamide ekwelapheni ubuhlungu obungapheli. Kunezifundo ezimbalwa kuphela kuyo kwiziguli ze-IBS nakumamodeli wezilwane we-IBS. Njengoba kunikezwe indima yohlelo lwe-endocannabinoid ohlelweni lwesisu kuyindatshana ethokozisayo yokuqhubeka nokuhlola indima ye-PEA kanye nama-receptors ahambisanayo ekwelapheni ubuhlungu.
Iphephe kangakanani i-palmitoylethanolamide (PEA)?
Ngisanda ku-oda i-PEA powder futhi isanda kufika ngeposi namhlanje. Ngangenza ucwaningo olwengeziwe mayelana nokuthi ngabe kukhona ubungozi nge-PEA ngoba iyi-COX2 inhibitor.
Kuphephile yini kimi ukuthatha i-PEA?
UPalmitoylethanolamide welapha izinhlungu zami zemizwa njengesimangaliso!
Bengifuna ukukulahla lokhu mhlawumbe omunye umuntu angakuthola kuzuzisa njengami. Ngibe sezinhlungwini zezinzwa ezingalapheki isikhathi esingaphezu kweminyaka engu-20. Bengiye eStanford, bengikhona kukho konke kusuka eFentanyl kuya e-morphine kuya ku-oxy nama-benzos, ama-anti depressants njll. Ngiye ngaba nokuhlinzwa okuningana futhi izinto zazanywa eminyakeni edlule kodwa akukho noyedwa umphefumulo owasikisela ukuthi ngizame le nto elula. Ezinye izinto zisizile kodwa lutho ukusebenza. Kwakubuhlungu nsuku zonke noma nini lapho ngibeka noma ngihlala phansi. Ngezinye izikhathi kwakunzima ukuhamba. Inkinga yayo yezinzwa emgogodleni wami ophansi kusukela ekuhlinzweni okudala okuthinta imizwa yami ye-pudendal. Ukulala kwakuyinto engangiyithola imizuzu engama-30 ngasikhathi futhi ngangivame ukuhamba izinsuku ngingayitholi nhlobo.
Muva nje umuntu engimaziyo uphakamise ukuthi ngizame into ebizwa nge-PEA. Benginokholo olungu zero ukuthi luzosebenza. Kodwa kwakubonakala kuphephe ngokwanele. Ngiyiqale into etholakala e-Amazon futhi efundwe iminyaka engama-60 kodwa bengingakaze ngizwe ngayo. Ibizwa ngePalmitoylethanolamide (PEA, ukuze ingadidaniswa nePhenethylamine nayo efushanisiwe i-PEA) I-Palmitoylethanolamide itholakala ngokwemvelo emizimbeni yethu nasekudleni kwethu. Kuyi "fatty acid amide" enemiphumela emihle ohlelweni lwe-endocannabinoid (futhi ikhulisa i-anandamide, i-cannabinoid yethu engapheli).
Ngithatha i-120mg kabili ngosuku. Ekuqaleni angibonanga lutho. Eqinisweni isonto lokuqala lalingomunye wamafulegi amabi kakhulu engake ngaba nawo esikhathini esithile. Ngesonto lesibili ngavuka ekuseni ngolunye usuku ngibona ukuthi ngilale ubusuku bonke. Ubuhlungu bami babuphelile. Ngabona ukuthi kwakuyisifo esibuhlungu. Ngangikhala ngentokozo. Kuvaliwe ngaphambili izinsuku ezimbalwa. Sekuphele isikhathi esingaphezu kwenyanga futhi kungekho buhlungu. I-PEA yaziwa ukuthi isebenza njengokulwa nokuvuvukala nobuhlungu bezinzwa. Ezinye izilingo ezincane zomtholampilo ze-FDA zaze zabonisa isithembiso kulezi zindawo.
Kukhona i-TON yezimangalo ezenziwe ngabantu zokuthi i-PEA izokwelapha zonke izinhlobo zezinto. IDK ngakho konke lokho. Engikwaziyo nje ukusiza ubuhlungu bami ngaphezu kwanoma yini enye engake ngayithatha. Ngisusile emithini yami yezinhlungu i-100%. Ngiphume kuyo yonke imishanguzo yami futhi angikabi nazo izinhlungu !!! Ingqondo yami yodokotela ishayiwe futhi uzozama ngesinye isiguli.
Uma uyizama inikeze amasonto ambalwa amahle. Kufanele ukudubula. Ayaziwa ukusebenzisana namanye ama-meds noma inomkhawulo owaziwa ngobuthi kepha njenganoma yini eqala kancane. Imithamo engaphezulu kwe-300mg inginika ikhanda elincane.
Kusebenza kuphela ebuhlungwini bezinzwa zami. Ngisabuzwa ubuhlungu obuvamile nezinhlungu. Ngaphandle kwalokho ngivele ngizizwe ngingcono. Uma uhlushwa ubuhlungu bezinzwa zomngcele kufanelekile ukuthi udutshulwe.
IMagnesium idume kakhulu ngokubanga amaphupho angasile, i-5-HTP ihlangana namaphupho nayo iirc.
Angikwazi ukuthatha i-magnesium ngaphansi kuka-3h ngaphambi kokulala noma kungenjalo ngiphupha kakhulu, angilali kahle.
Ngibone iPalmitoylethanolamide muva nje futhi ngizozama. Cishe cishe isonto noma ngaphezulu selokhu ngaqala ukuyisebenzisa futhi kungisizile impela.
Kungenza ngizizwe ngikhululeke kakhulu nokuyinto ebengingayilindele.
I-Palmitoylethanolamide, Ukudla Okukhethekile Kwezinhloso Zezokwelapha, ekwelashweni kobuhlungu obungapheli: Ukuhlaziywa kwedatha ehlanganisiwe. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26815246
I-Palmitoylethanolamide vs. Oleamide
Kancane, noma yikuphi umehluko wokuthi la ma-amide amabili anamafutha anithinta kanjani?
Zombili zibonakala zifana kakhulu ku-moa, ungaqiniseki ukuthi kufanele yini ukuzama enye phezu kwenye. Ikakhulu ifuna ukulinganisa kwe-Immune, ibhonasi yokuthuthukisa ikhwalithi yokulala.
Lona ngumbono wami
Ukungaguquguquki kwakuyimpuphu emhlophe, emhlophe. Ithathwe kancane, ibingenambitheka futhi ichithwa kancane kakhulu, mhlawumbe ngenxa yokuthi ayincibiliki amanzi.
Ngibe nokuhlangenwe nakho okuhle ngezinsuku ezingaba ngu-10 kusukela lapho ngiqala ukuyithatha.
Sekuyizinyanga ezimbalwa manje futhi ngiyayithanda. Ngizizwa ngingcono kakhulu futhi angikaze ngibone noma yimiphi imiphumela emibi.
Ngithatha ama-600 mg kabili ngosuku futhi isikhathi esingaphezu kwesonto futhi imiphumela ivelele.
Anginazo izinkinga nge-magnesium kodwa i-5htp ngaphambi kokulala yanginika amaphupho amabi ngaphambili. Bekufanele ngihambise i-5htp ntambama.
IPalmitoylethanolamide inginikeza ukukhululeka ebuhlungwini be-fibromyalgia. Futhi angisavuki ngizizwa sengathi ngishaywe ngensimbi ebuthongweni.